Thwebula FileZilla 3.47.1 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: FileZilla
FileZilla – a software ukulanda futhi ulayishe amafayela kusuka FTP-amaseva. Izici eziyinhloko isofthiwe zibandakanya ukuxhumana okuphephile, imenenja indawo, phindela thwebula ephukile ifayela, ukulondoloza isikhashana yizincwadi, search akude, ukuqhathanisa Izincwajana njll FileZilla isekela FTPS futhi SFTP Izivumelwano ngokuphepha ukudlulisa amafayela amaseva ezahlukene. Isofthiwe usebenta nelicembu zokuvikela eziningi enikeza ukuvikeleka kwemininingwane ngocansi ngenkathi esebenza amaseva FTP. FileZilla futhi ikuvumela ukuba ngokwezifiso enethiwekhi bebeka isikali ijubane ukunciphisa ingcindezi bandwidth.
Ukulanda kanye ukulayisha amafayela FTP-amaseva
Ukusekela ezahlukene ukudluliswa kwedatha Izivumelwano
Ukusebenza izibhulamlilo ezahlukene
I-FileZilla Server – iseva ye-FTP enesethi yezici ezahlukahlukene kanye nezinga elifanele lokuvikelwa ngenxa yokubethela kwe-SSL. Isoftware isekela ukufinyelela okukude kweseva.
Amazwana ku FileZilla
FileZilla software ehlobene
I-DropBox – ithuluzi lokulanda imininingwane ehlukile kwisitoreji samafu. Isoftware isekela ukuvumelanisa idatha kanye nokushintshana okulula kwamafayela.
Isipele se-Google nokuvumelanisa – iklayenti lenzelwe ukwenza isipele kanye nokuvumelanisa amafayela ngesitoreji samafu se-Google Drayivu. Isoftware iza neqoqo lezicelo ezengeziwe zehhovisi ezivela kwaGoogle.
Ithuluzi ezanele zokuxhumana ngezwi on the internet. Isofthiwe ikuvumela ukudala noma ngokwezifiso iseva yakho siqu futhi ukunikeza amalungelo abahloli.
I-HAL – ithuluzi eliwusizo lokusesha ngokushesha nangokufanelekile kwamafayela wesifufula ku-inthanethi. Isoftware ikuvumela ukuba useshe amafayela kuma-trackers akhethiwe akhethiwe.
Isofthiwe yakhelwe ukudala PDF amafayela eliphezulu ngokusebenzisa iphrinta virtual ukuthi baxhumana yisiphi isicelo ehhovisi.